बदलिँदो मनसुन : खै पूर्व तयारी ? | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
बदलिँदो मनसुन : खै पूर्व तयारी ?
जेठ २१, २०७६ मंगलबार ८:८:७ | मिनकुमार अर्याल
उपत्यकासहित देशभरको पहाडी क्षेत्रमा केही दिनदेखि नियमितजसो वर्षा भैरहेको छ । बिहान आकाशमा डम्म बादल लाग्ने, बेला बेलामा घाम लाग्ने र दिउँसोपछि अपरान्हतिर असिनासहित पानी आउने गर्छ । कहिलेकाहीँ एकै ठाउँमा एकदमै ठूलो पानी पर्छ ।
अहिले प्रिमनसुन (मनसुन सुरु हुनुभन्दा पहिले) को समय भएकाले यस्तो मौसमी गतिविधि भैरहेको हो । प्रिमनसुनी समयमा यस्तो गतिविधि सामान्य मानिन्छ । नेपालमा समान्यतया जुन १० तारिखदेखि मनसुन सुरु हुन्छ । यो वर्ष केही ढिलो गरी मनसुन सुरु हुने देखिएको छ ।
प्रत्येक वर्ष हिन्द महासागरलगायत ठाउँमा उत्पत्ती हुने मनसुनी वायु केरला हुँदै उत्तरपूर्वतिर बढ्दै भारतका विभिन्न स्थान तथा बंगलादेशतिर प्रवेश गर्छ । त्यहाँबाट मनसुनी वायुको दिशा परिवर्तन भई दक्षिणपूर्वी दिशाबाट नेपालमा मनसुन प्रवेश गर्छ । अहिलेसम्म मनसुन भारतको केरला आसपासमा आइपुग्नुपर्ने हो, तर भारतको केरला आसापास अहिले कुनै मनसुनी गतिविधि देखिएको छैन । तसर्थ नेपालमा जुन १० तारिख भन्दा केही ढिलो गरी मनसुन भित्रिन सक्छ ।
दक्षिण एसियाली जलवायु दृष्टिकोण मञ्चले गरेको अध्ययनले यो वर्षको मनसुनमा प्रदेश १, २ र ३ का धेरै ठाउँ तथा प्रदेश ५ को पश्चिमी क्षेत्रमा औसतभन्दा कम पानी पर्ने र अरु ठाउँमा औसत पर्ने आँकलन गरेको छ ।
केही वर्षयतादेखि मनसुनका समयमा असामान्य झरीहरु पनि पर्दै आइरहेको छ । अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृष्टिलगायत वर्षाबाट पैदा हुने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । ठूलो पानी जुनसुकै बेलामा पनि पर्न सक्छ । यो वर्ष प्रिमनसुनका समयमा पनि केही मात्रामा बढी पानी परेको देखिएको छ ।
मनसुनको समयमा आउनसक्ने सम्भावित जोखिमबाट बच्न हामी सबै सचेत हुन जरुरी छ । पहिला पनि मनसुन सुरु हुनुभन्दा पहिले मानिसहरु सचेत रहन्थे । अहिले पनि नेपालका ग्रामिण भूभागमा बर्खा सुरु हुन लाग्दा घरको करेसामा नाली बनाउने, बर्खाका लागि आवश्यक पार्ने काठ दाउराको जाहो गर्ने, घरगोठमा बलियो छानो लगाउने गरिन्छ ।
देशका केही भूभागमा अहिले पनि यही अवस्था रहे पनि अधिकांश भूभागमा मानिसहरुको जीवनशैली परिवर्तन भैसकेको छ । विशेषगरी शहरी भूभागमा अहिले बर्खाको समयमा जोखिम बढ्दै गैरहेको छ । नेपालमा वैज्ञानिक ढंगबाट शहरीकरण भैरहेको छैन । शहरीकरणको अवधारणामा मनसुनी गतिविधिले निम्तिन सक्ने जोखिमको बारेमा खासै ध्यान दिइएको पाइँदैन ।
शहरमा कतिपय स्थानमा त खोलाहरु मिचिएका छन् । अलि ठूलो वर्षा हुनेबित्तिकै पानी बग्न पाउँदैन । काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र नै हेर्ने हो भने, हनुमन्ते, वागमती, विष्णुमतीमा आएको बाढीले गएका वर्षहरुमा पनि क्षति पुर्‍याउँदै आइरहेको छ ।
पछिल्लो समयमा मानिसको जीवनशैली एकातर्फ फेरिँदै गइरहेको छ भने मनसुनी गतिविधि पनि अर्कोतर्फ फेरिँदै गइरहेको छ । यसले गर्दा थप चुनौती पनि बढीरहेको छ ।
यो वर्ष प्रिमनसुनी समयमा धेरै वर्षा भैरहेको र मनसुन कस्तो होला भने जिज्ञासा धेरैलाई लागिरहेको हुनसक्छ तर प्रिमनसुनी वर्षा र मनसुनी वर्षामा कुनै पनि सम्बन्ध रहँदैन । प्रिमनसुन अर्थात् मनसुन प्रवेश गर्नुअघि स्थानीय वायुको प्रभावले वर्षा गराउँछ ।
यो समयमा बिस्तारै तापक्रम बढ्दै जाने हुनाले अपरान्हसम्म वायुमण्डलको तल्लो सतहको हावा बेस्सरी तात्छ र माथि जान्छ । त्यसले छिट्टै बादल विकास हुन्छ । साँझपख हावा हुरी र असिनासहित पानी पर्छ । भने मनसुनी वर्षा बंगालको खाडीबाट आएको वायुको प्रभावले हुने गर्छ ।
यो वर्ष प्रिमनसुनी समयमा नै भएको मौसमी गतिविधिले मानिसमा त्रास पनि फैलाएको छ । नेपालमा नै पहिलो पटक बारा र पर्सामा आएको टोर्नाडोले ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । मौसमी अवस्थाको बारेमा पूर्वजानकारी भएको भए पनि यसको क्षति कम गर्न सकिन्थ्यो होला भन्ने कतिपयको गुनासो पनि आएको थियो त्यो बेलामा । तर नेपालमा प्रयोगमा आएका पूर्वानुमानसम्बन्धी उपकरणले यसबारेमा थाहा पाउन सकेन ।
केही वर्ष अघिसम्म मौसमविदहरुले परम्परागत प्रविधिमार्फत मौसमको भविष्यवाणी गरिन्थ्यो । वेदर चार्ट एनालाइसिस अर्थात् नक्सामा पहिलेका डाटाहरु तथा उच्चचापीय र न्यूनचापीय क्षेत्र हेरेर मौसमको हिसाब गरेर मौसम पूर्वानुमान गरिन्थ्यो ।
तर अहिले परम्परागत विधिसँगै आधुनिक प्रविधिको पनि प्रयोग गरिन थालिएको छ । कम्प्युटर भूउपग्रहको तस्बिर र वायुमण्डलको अवस्था हेरेर मौसमको भविष्यवाणी गरिन्छ ।
यस प्रविधिबाट वायुको बहाव, न्यूनचापीय र अधिकचापीय क्षेत्रको अवस्थालगायतको विश्लेषण गरी मौसम भविष्यवाणी गरिन्छ । आधुनिक ‘स्याटलाइट डिस्ट्रिब्युट सिस्टम’ मार्फत प्राप्त हुने विश्वका विभिन्न स्थानको मौसम जानकारीलाई थप स्रोतको रूपमा उपयोग समेत गरिन्छ ।
यसरी विस्तृत रूपमा विभिन्न वैज्ञानिक प्रविधिको माध्यमबाट अध्ययन तथा विश्लेषणपछि सामान्यतया नेपालका भूभागलाई तीन भागमा अर्थात् पश्चिम, मध्य र पूर्वी भेगमा विभाजन गरिन्छ । र ती भेगमा देखा पर्न सक्ने मौसमी गतिविधिलाई समेटेर मौसम भविष्यवाणी गरिन्छ ।
यसैगरी मेघ गर्जन र चट्याङ परिरहेको क्षेत्र र त्यो प्रणाली कता सर्दैछ भन्नेबारेमा पनि पछिल्लो समयमा अध्ययन र पूर्वानुमान हुन थालेको छ । यसबाट पनि सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्न सक्छ ।
–मौसमविद् मिनकुमार अर्यालसँग अशोक कोइरालाले गरेको कुराकानीमा आधारित
अन्तिम अपडेट: माघ २२, २०७६
अर्याल माैसम पूर्वानुमान महाशाखाका माैसमविद् हुनुहुन्छ ।
बिरामीको बहानामा एम्बुुलेन्समा यात्रु ओहोरदोहोर
‘लकडाउन’ उल्लङ्घन गर्ने एक सय ३४ वटा गाडी ट्राफिक प्रहरीको निय...
प्रहरीको नयाँ योजना : आदेश उल्लङ्घन गर्नेलाई पक्राउ होइन ‘होल्ड’
कोरोना सङ्क्रणमको जोखिम र सङ्कटसँग जुध्न उच्चस्तरीय विज्ञ समिति ...
कोरोनाविरुद्ध लड्न टाटाले भारतलाई पाँच सय करोड सहयोग गर्ने
खाली सडकको सदुपयोग, 'रोड मार्किङ' सुरु
पश्चिमी सीमा नाकाबाट अवैध रुपमा भित्रिए एक हजार नेपाली
कोरोना रोकथाम तथा उपचार कोषमा अख्तियारको सहयोग
'लकडाउन' को समयमा समूह बनाएर प्रार्थना गराउने दुई जना पास्टर...
प्रदेश ५ : कोरोनाको आशङ्का गरिएका २३ जनाको रिपोर्ट ‘नेगेटिभ,...
भक्तपुरमा दैनिक पाँच घण्टा बजार खुल्यो, ‘लकडाउन’ उल्लङ्घन
दक्षिणकाली नाका हुँदै दैनिक १५० मानिस उपत्यकाबाट बाहिरिँदै
‘लकडाउन’को मारमा सामान्य बिरामी र दीर्घरोगी
चौथो सङ्क्रमित भेटिएपछि उच्च सावधानी अपनाउन सरकारको आग्रह
'लकडाउन' को समयमा समूह बनाएर प्रार्थना गराउने दुई जना पास्टर पक्राउ
‘यूएईमा म ठिक छु, घरमा बुवाआमालाई पनि नआत्तिनुहोस् भनेर सम्झाउँछु’
कतार एअरवेजमा सँगै आएका थिए कोरोनाका दोस्रो र पाँचौँ बिरामी
कोरोनाको कहर, सिक्ने सिकाउने अवसर
चैत १२, २०७६ बुधबार
आपतका बेला संयम अपनाउने हो, अनावश्यक कुरा सोच्दा रोगसँग लड्न...
चैत ११, २०७६ मंगलबार
कोराेना भाइरसले उत्पन्न गरेको मनावैज्ञानिक त्रासलाई यसरी कम गरौँ
चैत ८, २०७६ शनिबार
मलेसियामा पनि लकडाउन छ, जोखिबाट बच्न सुरक्षा सतर्कता अपनाऔं
१७ वर्षको परदेश बसाईमा पहिलो पटक डर र अभाव देखेँ
चैत १०, २०७६ सोमबार